SMPTE နှင့် DPP ၏ပထမဆုံး SMPTE အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်မူကြမ်းအားအကောင်အထည်ဖော်ရန်ရှေ့ပြေးစီမံကိန်းတွင်ပူးပေါင်းပါ ၀ င်သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » ပထမဦးစွာ SMPTE Specification ၏မူကြမ်းကယ်ယူမှရှေ့ပြေးစီမံကိန်းအတွက် SMPTE နှင့်ပီပီပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်
ပထမဦးစွာ SMPTE Specification ၏မူကြမ်းကယ်ယူမှရှေ့ပြေးစီမံကိန်းအတွက် SMPTE နှင့်ပီပီပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်
White Plains, နယူးယော့ - ဖေဖော်ဝါရီလ 28, 2018 - SMPTE®, အဘယ်သူ၏စံချိန်စံညွှန်းများအလုပ်ဖျော်ဖြေရေးနည်းပညာတိုးတက်လာတစ်ရာစုထောက်ခံနှင့်သူ၏အဖွဲ့ဝင်ကမ္ဘာလုံးအထိချဲ့ထားပြီးအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ထုတ်လုပ်မှုမိတ်ဖက် (ပီပီ), မီဒီယာစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကွန်ယက်ကိုတစ်ဦးပထမဦးဆုံး၏၏အောင်မြင်မှုကိုကြေညာ ရှေ့ပြေးပုံစံသတ်မှတ်ပေးရန် -a-ကြင်နာရှေ့ပြေးစီမံကိန်း SMPTE အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်ဖြစ်စဉ်ကို။ SMPTE နှင့်ပီပီပထမဦးဆုံးမူကြမ်းကယ်လွှတ်ကြပြီ SMPTE အဆိုပါအပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါမာစတာ Format ကို (IMF က) ၏အသုံးပြုမှုကိုအာရုံစိုက်ထားတဲ့ specification, သို့မဟုတ် SMPTE ထုတ်လွှင့်နှင့်အွန်လိုင်း application များအတွက် ST 2067 ။
အဆိုပါပီပီထုတ်လွှင့်နှင့်အွန်လိုင်း applications များဖို့အတှကျ IMF ကလိုအပ်ချက်များနှင့် IMF Specification ၏အလုပ်လုပ်ကိုင်မူကြမ်းကိုအပ် SMPTE အုန်းတော, ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာရှိတဲ့ HPA Tech မှသီးသန့်မှာပြီးခဲ့သည့်အပတ်က။ အဆိုပါစာရွက်စာတမ်းများပီပီသဖြင့် input ကိုကိုယ်စားပြုသည်, SMPTEသည်မြောက်အမေရိကလူငယ်ကဏ္ဍအသင်း (NABA), နှင့်ဥရောပအသံလွှင့်ယူနီယံ (EBU) အဖြစ်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်မီဒီယာလုပ်ငန်းနယ်ပယ်အနှံ့အဆုံးအသုံးပြုသူများသည်။
အခုတော့အများပြည်သူမှတ်ချက်ပေးရန်ထဲကထုတ်လွှင့်နှင့်အွန်လိုင်း application များအတွက် IMF ကများအတွက်မူကြမ်းသတ်မှတ်ချက် MXF Track ဖိုင်များအပါအဝင်ကန့်သတ်, ဖွဲ့စည်းမှုဖွင့်စာရင်းများကို (CPLs), output ကိုပရိုဖိုင်းကိုစာရင်းများ (OPLs) နှင့် IMF က packages များဖြေရှင်းပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါသတ်မှတ်ချက်တွင်ထိုကဲ့သို့သောအရည်အသွေးကို-ထိန်းချုပ်မှု metadata ကိုနှင့် EBU-TT တင်ဆောင်လာသောများအတွက် EBU.io/qc စီမံကိန်းကိုအဖြစ်အဖြစ်ကောင်းစွာနဲ့အခြားလှုပ်ရှားမှုများရည်ညွန်းပါလိမ့်မယ်, ဒါကြောင့်ဥရောပနှင့် CTA-608 / CTA- အတွက်ရိုးရာ EBU-STL စာတန်းထိုးတင်ဆောင်ဘို့ optional ကိုနည်းလမ်းများကိုလည်းပါဝင်သည် မြောက်အမေရိက 708 စာတန်းများကို။
IMF ကစံအပျေါမှာတညျဆောကျ, ဒီပထမဦးဆုံး SMPTE specification သူတို့ရဲ့တည်ဆဲအကြောင်းအရာမော်ကွန်းတိုက်နှင့်အတူ IMF က Workflows သုံးစွဲဖို့ထုတ်လွှင့်အားဖွင့်အတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှပါလိမ့်မယ်, ဒါကြောင့်လည်းအကြီးစားအပေါ်ဖိုင်-based အပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါများ၏သဘောပေါက်လွယ်ကူချောမွေ့ပါလိမ့်မယ်။ သူတို့စာဖတ်သူများဒီဇိုင်းနှင့်တည်ဆောက်ခြင်းအတွက်ရှေ့ဆက်ဖို့လိုအပ်လမ်းညွှန်မှု, စာရေးဆရာများနှင့်ဖြာနှင့်အတူထုတ်လုပ်သူပေးခြင်းအားဖြင့်, ထိုသတ်မှတ်ချက်သည် broadcast နှင့်အွန်လိုင်းဘုံသို့ပိုပြီးအပြည့်အဝ IMF က၏အကျိုးကျေးဇူးများဆောင်ခဲ့ဦးမည်။
"ဟုအဆိုပါပီပီနှင့်အတူဒီရှေ့ပြေးစီမံကိန်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းများကအရမ်းပထမဦးဆုံးဖွံ့ဖြိုးဆဲနှင့်မှတ်ချက်အဘို့အထွက်ချပြီး၏ဖြစ်စဉ်ကိုချောမွေ့ရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည် SMPTE specification "ပြောသည် SMPTE စံချိန်စံညွှန်းများဒုတိယသမ္မတဘရုစ် Devlin ။ "ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် သာ. ကြီးမြတ်သွက်လက်နှင့်အတူ, သတ်မှတ်ချက်များအစောပိုင်းအဆင့်နည်းပညာများနှင့်စီးပွားရေးမောင်းနှင်သတ် addressing ကိုကောင်းစွာ-တော်ပါတယ်ဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါ HPA Tech မှသီးသန့်မှာတစ်ဦးကကျန်းမာဆွေးနွေးငြင်းခုံလျင်မြန်စွာနည်းပညာတရားဝင်နှင့်ကြံ့ခိုင်စံ၏နောက်ဆက်တွဲဖန်ဆင်းခြင်းတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည့်ပွတ်တိုက်မှုကိုလျှော့ချနိုင်သည့်သတ်မှတ်ချက်ဤအမျိုးအစားတစ်ခုစက်မှုလုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်ရှိကြောင်းပြသသည်။ "
အဆိုပါရှေ့ပြေးပုံစံ SMPTE အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်ဖြစ်စဉ်ကိုဤစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူကျင့်သုံးလိမ့်မည်, ထိုဖြစ်စဉ်ကိုသူ့ဟာသူကမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ပါလိမ့်မည် SMPTE လူအပေါင်းတို့အားပွင့်လင်းတဲ့သတ်မှတ်ချက်များဝန်ဆောင်မှုအဖြစ်စက်မှုလုပ်ငန်းကမ်းလှမ်းခံရမီပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ၏ဘုတ်အဖွဲ့။
"ဟုအဆိုပါထုတ်လွှင့်နှင့်အွန်လိုင်းလူမှုအသိုင်းအဝိုင်း လိုက်. IMF ကအဘို့ဤအသစ်ကိုနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ, အခွင့်အလမ်းသို့ versioning ၏စိန်ခေါ်မှုလှည့်။ ဒါဟာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အသတ်မှတ်ချက်များကို real-ကမ္ဘာတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်နိုငျပုံကိုများစွာသောသာဓကပါပဲ "ဟုဆိုပါတယ် SMPTE ဗြိတိန်နိုင်ငံဒေသဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်ပီပီ, Mark Harrison ၏ Managing Director ။ "ကျနော်တို့ကရှေ့ကိုအချိန်ဇယား၏မှတ်ချက်ဤစာရွက်စာတမ်းထုတ်ဝေကြေညာနိုင်မှဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခြင်းနှင့် 2018 ၏ကြိုတင်မဲအတွက်ပါပဲ NAB ပြရန်။ "
သူတို့က, သစ်ကိုအပြီးသတ်ကြသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် SMPTE စာရွက်စာတမ်းများသည်အခြားပူးပေါင်းပါလိမ့်မယ် SMPTE စံချိန်စံညွှန်းများ, ထိုအကူအညီကိုထုတ်လုပ်သူ, အင်ဂျင်နီယာများနှင့်အသံလွှင့်, ရုပ်ရှင်ရုံ, နှင့်အွန်လိုင်းဗီဒီယိုထဲမှာအသစ်သောထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့နည်းပညာသမားအပါအဝင်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာစာပမြေား။ အဆိုပါမူကြမ်းစာရွက်စာတမ်းများ www.digitalproductionpartnership.co.uk/publication/#publication-9771 မှာရရှိနိုင်ပါသည်။
"ပေးပို့ခြင်းမှတဆင့်လိုအပ်ချက်များကိုနှင့်သတ်မှတ်ချက်တွင်စာရွက်စာတမ်းများထိနျးကြောငျးအတွက်ပီပီ၏အလုပ်ထူးခြားတဲ့ခဲ့," ဟုပြောသည် SMPTE အင်ဂျင်နီယာနှင့်စံချိန်စံညွှန်း Howard Lukk ၏ဒါရိုက်တာ။ "တိုတောင်းတဲ့အချိန်အပိုင်းအခြားအတွင်းအားကောင်းတဲ့သတ်မှတ်ချက်နှင့်ဆက်စပ်လိုအပ်ချက်များကိုဖန်တီးအပြင်, ဤစီမံကိန်းတစ််သတ်မှတ်ချက်တွင်မူဘောင်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အခြားအရေးပါသောအအင်ဂျင်နီယာစာရွက်စာတမ်းများ၏လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဖြည့်နိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုသရုပ်ပြခဲ့သည်။ "
အကြောင်းကိုနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ SMPTE မှာရရှိနိုင် smpte.org ။
ဒစ်ဂျစ်တယ်ထုတ်လုပ်မှုမိတ်ဖက်, Ltd (ပီပီ) ကမီဒီယာစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်စီးပွားရေးကွန်ရက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာတပြင်လုံးကိုမီဒီယာထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်အထိချဲ့ထားတဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်အတူမများအတွက်အကျိုးအမြတ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါပီပီ, ထိုးထွင်းသိမြင် generate ပြောင်းလဲမှုကို enable နှင့်စျေးကွက်အခွင့်အလမ်းများဖန်တီးရန်၎င်း၏အဖွဲ့ဝင်များ၏စုပေါင်းထောက်လှမ်းရေးထဲကနေအလားတူ။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, သို့မဟုတ်အဖွဲ့ဝင်အလည်အပတ်ခရီး www.digitalproductionpartnership.co.uk အကြောင်းကိုမေးလျှောက်ရန်။
ကျော်ရာစုအဘို့, Motion Picture နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအင်ဂျင်နီယာများ၏ Society ရဲ့လူအ, ဒါမှမဟုတ် SMPTE ( "simp-Tee" အသံထွက်), ကို "talkies" ၏နိဒါန်းနှင့်အရောင်ရုပ်မြင်သံကြားကနေရန်, မီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးနည်းပညာများစွာကိုသိသာထင်ရှားသောတိုးတက်မှု၏အသေးစိတျအထဲကခွဲထားခဲ့သည်ပါပြီ HD နှင့် UHD (4K, 8K) TV ကို။ 1916 အတွက်၎င်း၏တည်ထောင်ကတည်းက SMPTE စက်မှုလုပ်ငန်းအနှံ့ရွေ့လျားနေသည့်-ပုံရိပ်အင်ဂျင်နီယာတိုးတက်၎င်း၏အလုပ်တစ်ခုOscar®နှင့်မျိုးစုံEmmy®ဆုပေးပွဲကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ SMPTE အင်အားသုံးလက်ရှိယနေ့များမှာ 800 ထက်ပိုသောစံချိန်စံညွှန်းထောင်ပေါင်းများစွာ၏, အကြံပြုအလေ့အထများနှင့်အင်ဂျင်နီယာလမ်းညွှန်ချက်များ, တီထွင်ခဲ့သည်။ SMPTE အချိန် Code ကို™နှင့်နေရာအနှံ့ SMPTE အရောင်ဘား၏နေကြသည်ရုံဥပမာနှစ်ခုကို™ SMPTE'' s ကိုမှတ်သားလောက်အလုပ်။ ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ဒုတိယရာစုထဲသို့ဝင်သကဲ့သို့ပင်, SMPTE စံချိန်စံညွှန်းများရဲ့နောက်မျိုးဆက်ပုံဖော်နှင့်စက်မှုလုပ်ငန်း IT- နှင့် IP-based Workflows သို့ထပ်မံတစတစတိုးတက်ပြောင်းလဲလာအဖြစ်အပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါသေချာစေရန်စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ပညာရေးထောက်ပံ့နေသည်။
SMPTE'' s ကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဖွဲ့ဝင်ယနေ့ 7,000 အဖွဲ့ဝင်များကထက်ပိုမိုပါဝင်သည်: ရွေ့လျားမှု-ပုံရိပ်အမှုဆောင်အရာရှိ, ဖန်တီးမှုများ, နည်းပညာသမား, သုတေသီများနှင့်၎င်းတို့၏အချိန်နှင့်ကျွမ်းကျင်မှုစတေနာ့ဝနျထမျးသောကျောင်းသားများ SMPTE'' s ကိုစံချိန်စံညွှန်းများဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ပညာရေးအစပျိုး။ ယင်းနှင့်အတူတစ်ဦးကမိတ်ဖက် ဟောလိဝုဒ် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသင်း (HPA) connection SMPTE နှင့်မီဒီယာအကြောင်းအရာ၏ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်ပြီးပံ့ပိုးကူညီသူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီနှင့်အတူ၎င်း၏အဖွဲ့ဝင်။ ပူးပေါင်းအပေါ်ပြန်ကြားရေး SMPTE www မှာရရှိနိုင်ပါပြီ။smpte.org / join ။
နှုတ်ကပတ်တော်ကို Doc သို့ Link ကို: www.wallstcom.com/SMPTE/180228SMPTE.docx
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.wallstcom.com/SMPTE/SMPTE-DPP-အထူးအသေးစိတ်-Handoff.jpeg
ဓာတ်ပုံစာတန်းထိုး: (LR) ပီပီ၏အန်ဒီဝီလ်ဆင်, ဘီဘီစီ၏အန်ဒီ Quest; SMPTE ထို့အပြင်ပီပီ၏ဗြိတိန်, Mark Harrison များအတွက်ဒေသဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး; SMPTE အလုပ်အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ Barbara Lang; SMPTE စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အင်ဂျင်နီယာ Howard Lukk ၏ဒါရိုက်တာ; နှင့် SMPTE အုန်းတော, ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာရှိတဲ့ HPA Tech မှသီးသန့်မှာမူကြမ်းကို IMF ကအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်နှင့်အတူစံချိန်စံညွှန်းများဒုတိယသမ္မတဘရုစ် Devlin
တွစ်တာပေါ်မှာ Share: twitter.com/intent/[အီးမေးလျ protected]% 20and%[အီးမေးလျ protected]%20deliver%20%23firstever%20%23SMPTE%20%23specification%20%23IP%20%23broacasttech%20-%20http://bit.ly/2CNrLTY
2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း ပီပီ IMF က NAB 2015 NAB 2016 NAB ပြရန် Show ကို 2016 NAB NAB16 nabshow လေယာဉ်မှူးကစီမံကိန်း SMPTE SMPTE Specification 2018-02-28
ယခင်: AV စနစ်ဒီဇိုင်း & ဖြန့်ကျက်အင်ဂျင်နီယာချုပ်
နောက်တစ်ခု: အဆိုပါ 2018 NAB Show မှာပြမျက်နှာပြင်ပေါ် Vinten ထုတ်ကုန်များ